Kedu ihe bụ EAT na SEO na otu esi eme ya? | ECommerce ozi ọma
Ọ bụ otu akụkụ nke ị nwere ike isi nweta ọtụtụ akụrụngwa maka mmepe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ịntanetị. Site na usoro ejiri mara ihe nke oma na inye otutu uzo n'ime njikwa ahia gi karia i nwere ike inwe site na mbido. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eche na ị ga-anọnyere usoro ọhụrụ na azụmaahịa dijitalụ, dịka nke a bụ ikpe.
Ọfọn, na iji banye n'isiokwu a ugbu a, EAT bụ acronym na-anọchi anya atọ nke isi akụkụ maka ịrụ ọrụ nke ọma SEO njikarịcha: Ahụmahụ, ikike na ntụkwasị obi. Mana… gini jikoro T na obi ike? Nkọwa dị mfe: dị ka ọtụtụ echiche dị na Azụmaahịa Ntanetị, acronyms ndị a sitere n'okwu Bekee "Ọkachamara, Ikike, Ntụkwasị Obi".
Akụkụ ọzọ nke ị ga-enyocha site n'oge a gaa bụ nke metụtara ụdị azụmahịa gị. Site na echiche a, enweghi obi abụọ na n'ikpeazụ Of ga-achọ ọkwa dị elu ma ọ bụ dị ala karịa na ozi ị na-enye. Dịka ọmụmaatụ, na weebụsaịtị nke nyocha nke oge ezumike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ, enwere ike ịkọwa ọdịnaya ọ bụla dị ka nke "ọkachamara" (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ gaghị ata ya ahụhụ dịka ọkwa nke ahụmịhe ya), ebe ọ bụ na saịtị ndị a chọrọ echiche na "ahụmịhe kwa ụbọchị" nke na-agaghị esite n'aka onye maara nnukwu ihe gbasara isiokwu a.
1 Rie na SEO: ahụmahụ
2 Ọnọdụ weebụsaịtị
3 Ọnọdụ weebụsaịtị
4 Mee ihe niile ị nwere ike ime iji gosipụta iri nri gị.
5 Nyochaa ọdịnaya
Rie na SEO: ahụmahụ
Eziokwu bụ na ọ bụghị maka ịkọwa ọkachamara ọ bụla, mana ọdịnaya n'onwe ya na-egosi ma ọ bụ onye maara ma ghọta ihe ha dere. Maka ihu akwụkwọ ka etinyere ya nke ọma, ọdịnaya ya ga-atọrịrị ndị ọbịa ụtọ, yana nke mbụ na nke eziokwu. Ọ bụ ya mere Google ga-eji chepụta ọdịnaya ọdịnaya nke na-agbaso iwu ndị a ka ọ bụrụ ọkachamara n'okwu ahụ.
The eke njikọ i nwere: n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ ikike, ihe ezi uche dị na ya bụ na weebụsaịtị ndị ọzọ a tụkwasịrị obi na ngalaba gị jikọtara ibe gị dị ka ntụaka. Kpachara anya, rịba ama na anyị akọwapụtala "eke". Ọ bụrụ na ọdịnaya gị dị mma na ụlọ ọrụ gị emeela ezigbo ọrụ SEO On Page, njikọ ndị ahụ ga-abịa n'onwe ha.
Isiokwu ika: Ndị mmadụ na-achọrịrị aha azụmaahịa gị na Google? Nke ahụ bụ ezigbo ihe na-egosi Google na ị na-eme nke ọma.
Ntaneti mmekọrịta: Ọ bụrụ na ịkekọrịta ọdịnaya gị ọ bụkwa ihe ịrịba ama na-ahụ gị dị ka ntụnye.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọzọ, anyị na-ekwu maka echiche metụtara ọrụ ọrụ onyonyo gị n'ozuzu.
Ọ bụkwa ezigbo echiche. Onye Google ga-ebu ụzọ gosi? Na weebụsaịtị nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma ọ bụ nke anyị na-enweghị ntụnye aka na ya? Isi ihe dị ebe a bụ ịhụ otu anyị si akụzi Google na anyị "nwere ntụkwasị obi."
Anyị na-enye gị ụfọdụ echiche:
Ozi mkpọtụrụ: gosi n'ụzọ doro anya otu ha nwere ike isi kpọtụrụ gị. Ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere ọfịs, ọ dịkwa mma ka ị jikọtara profaịlụ gị na adreesị.
Peeji echedo ma ọ bụ HTTPS: Ọ bụ ezie na nke a adịkwaghị mkpa Google, kama ọ bụ na ndị ahịa gị nwere ike ịnwe udo nke uche na weebụsaịtị gị dị mma yana echedokwara ozi ha.
Ibe iwu: ee, ndị na-enweghị onye na-elebara anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-edegharị. Mee ka ibe gi megharia ma di mfe inweta. Ọ bụrụ n ’ịre ngwaahịa, otu a metụtara iwu nloghachi gị.
N'ezie, akụkụ a na-ezo aka na akụkụ ndị ọzọ nke teknụzụ, dị ka ịnwe akwụkwọ SSL na Portal anyị, igodo na mmiri dị mfe (na-enweghị ịghọ aghụghọ ule), oge nnabata ngwa ngwa, wdg.
Eat metric na-etinye na Portals ọ bụla, mana o nwere mkpa pụrụ iche na YMYL portals, nyere ọdịdị na mkpa dị mkpa nke ọdịnaya ndị ekpuchitere n'ụdị ụzọ a. Ọ bụrụ na ọnụ ụzọ gị anọwo na-ada n'efu ọnwa ole na ole ma ị maghị ihe kpatara ya, ị ga-atụle itinye usoro nke ụdị a iji belata mmetụta nke mmelite a.
Na ntuziaka Google maka ndị nyocha ha na-egosi nke bụ ihe kachasị mkpa iji tụọ ogo nke ibe, ndị a bụ:
Ebumnuche nke ibe.
Ogologo iri nri, ha kọwara ya dị ka "njirimara njirimara dị mkpa".
Ezi ọdịnaya nke ọdịnaya dị mma. Na ọdịnaya nkọwa na aha ọma. Nke a na-ewe oge, mgbalị, ahụmịhe, na nkà.
Ozi zuru ezu na saịtị ma ọ bụ ozi gbasara onye na-ahụ maka ọdịnaya ndị ahụ.
Aha ọma nke saịtị na aha onye nchịkọta akụkọ.
N'aka nke ọzọ, na Google na-ahụ dị ka ibe adịghị mma nke nwere obere ọkwa EAT, ọdịnaya dị ala, obere ọdịnaya maka ebumnuche ibe. Ọ bụrụgodị na aha a na-ekwubiga okwu ókè ma ọ bụ dị egwu. Ọzọkwa, na ọ nwere ọkwa na-adọpụ uche site na ọdịnaya dị na ya. Na saịtị ahụ nwere aha ọjọọ.
Mee ka aha gị n'ịntanetị ka mma ma nata nyocha site na saịtị ndị ọzọ. Cheta na ihe ndị mmadụ kwuru gbasara azụmahịa gị gbasara ọtụtụ ihe.
Ejula ọkwa gị na ọkwa gị.
Gosi akara gi na ndi dere ya, ya mere i gha enweta obi ike.
Cite akwukwo ndi kwesiri ekwenye na ederede ma nweta njikọ dika isi mmalite ederede ndi ozo.
Gbaa mbọ hụ na ọdịnaya YMYL gị sitere na ihe akaebe sayensị.
Nweta aha sitere na saịtị ikike yana ọgbakọ.
N'izugbe, ị ga-enwerịrị ntụkwasị obi.
Mee ihe niile ị nwere ike ime iji gosipụta iri nri gị.
Site na nke a, ekwesịrị ịmara na ọ bụghị ihe ijuanya na Google tụkwasịrị obi karịa na ibe ndị na-ekpughe data ha nke ọma, dịka onye nwe ngalaba ahụ, ebe ụlọ ọrụ ahụ dị, aha ndị editọ, wdg ... Nke ahụ dịka ọmụmaatụ, peeji ndị na-aga n'ihu iji "Whois" na-enweghị aha ma ọ bụ na anaghị ekpughe data ọ bụla.
Knowingmara onye na-ede ihe, onye nwere ibe weebụ na ọbụna adreesị nke ibe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ kwuru, bụ ihe na-enye onye na-agụ ya obi ike na Google nwere mmasị.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, akụkụ ọzọ kachasị mkpa nke metụtara okwu a bụ ezigbo temometa iji welie weebụsaịtị nke ụlọ ahịa anyị ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ọ na - enye ọtụtụ njirimara nke anyị ga - ekwu maka ya site ugbu a gawa:
Njirimara izizi nke ibe di elu bu oke ogo EAT. Ndepụta ahụ gụnyere dị ka mgbakwunye:
• Nnukwu ahụmịhe, ikike na ntụkwasị obi, gụnyere EAT nke nchịkọta akụkọ na / ma ọ bụ onye edemede nke isiokwu na ozi dị na ibe.
• Nwee ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọdịnaya dị elu.
• Nwee ozi zuru oke banyere onye na-ahụ maka saịtị ahụ yana / ma ọ bụ ozi zuru oke banyere ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na saịtị ahụ bụ maka ịre ere n'ịntanetị, ọ kwesịrị ikwupụta n'ụzọ doro anya na ihu akwụkwọ otu esi eme azụmahịa ego.
• nweta ozi doro anya na nke eziokwu, na mgbakwunye na ọdịnaya bara uru na igodo enyi na enyi, aha ọma nke saịtị ahụ.
Ihe niile a tụlere nwere ike ịnye gị ntọala nke ihe iri nri na otu ị ga - esi jiri ihe ọmụma a mee ka ọkwa gị dị mma. Inwe ezigbo njirimara na Google bụ ihe dị mkpa mgbe ọ na-abịa n'ịdị elu na nsonaazụ ọchụchọ. Anyị nwere olile anya na nke a ga - enyere gị aka ịmalite ma bido ime ka websaịtị gị na - enye nka, ikike, yana ntụkwasị obi na ọdịnaya gị niile.
Iji nyochaa ọdịnaya weebụ anyị, anyị ga-aza usoro nke ajụjụ ga-enyere anyị aka ịmata ma ozi anyị na-enye na-ezute ihe ndị achọrọ maka mmelite ọhụrụ a nke Google algorithm. Ajụjụ ndị bụ isi bụ:
Ihe ọdịnaya ahụ ọ na-enye ozi mbụ, akụkọ, nyocha, ma ọ bụ nyocha?
Ihe ọdịnaya ahụ ọ na-enye nkọwa dị oke mkpa, zuru ezu, ma ọ bụ zuru ezu nke isiokwu ahụ?
Ihe ọdịnaya a ọ na-ewepụta nyocha nwere nghọta ma ọ bụ ozi na-atọ ụtọ nke doro anya karịa karịa?
Ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ sitere na isi mmalite ndị ọzọ, ị na-ezere nanị idetuo ma ọ bụ degharịa ihe ndị ahụ ma wee nyekwuo uru na mbido dị ukwuu?
Isi na / ma ọ bụ aha peeji ahụ ọ na-enye nkọwa nkọwa na nke bara uru nke ọdịnaya ahụ?
Aha na / ma ọ bụ aha nke ibe ahụ na-ezere ikwubiga okwu ókè ma ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ na okike?
Nke a bụ ụdị nke ibe ịchọrọ ịdebanye, soro enyi gị, ma ọ bụ kwado ya?
You ga-atụ anya ịhụ ọdịnaya a na magazin mbipụta, akwụkwọ encyclopedia, ma ọ bụ akwụkwọ ọ zoro aka na ya?
Mgbe emechara, ekwesiri igosiputa ya na EAT na SEO bu echiche na igaghi ama ihe ihe omuma a putara ma o nwere ike buru oke uru maka mmepe ulo ahia gi ma obu ahia gi
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Kedu ihe bụ EAT na SEO na otu esi eme ya?
Gini kpatara iji tinye na netwọtụ ebe ị na-anakọta ma ọ bụrụ na ị nwere eCommerce?